Ejikọtara uru ịdị arọ na enweghị mmasị karịa - Ụwa 2022
Ejikọtara uru ịdị arọ na enweghị mmasị karịa
Ndị na-ebuba ibu site na iri enyemaka nke abụọ maara nke ọma omume ha, mana ha enweghị ike iguzogide ọnwụnwa ahụ.
Dị ka nnyocha ọhụrụ e bipụtara na Psychological Science, ndị nwere ibu ibu na-emekarị ka ha kwenye n'ọnwụnwa, ọ bụ ezie na ha na-echeba echiche banyere omume ha. Ọkà mmụta n'akparamàgwà mmadụ Angelina Sutin nke Florida State University College of Medicine na ndị ọrụ ibe na National Institute of Health (NIH) chọrọ ịghọta ka mgbanwe n'ịdị arọ ahụ si metụta mgbanwe mmadụ.
Ndị nchọpụta ahụ chere na "ndị buru ibu ga-aghọ ndị na-akpali akpali, ndị na-enweghị ọzụzụ, na ndị na-adịghị eche echiche n'ihi na oke mkpali, ịdọ aka ná ntị onwe onye dị ala na nlebara anya dị ala ejikọtawo na ọnụ ọgụgụ dị elu nke anụ ahụ na ibu ibu."
Ọmụmụ ihe ahụ nwere ule abụọ dị iche iche, NIH's Baltimore Longitudinal Study of Aging na ọmụmụ ihe Mpaghara Epidemiological Catchment Area. Ha chịkọtara data gbasara njirimara mmadụ na ịdị arọ ahụ nke ihe karịrị mmadụ 1,900 n'oge oge abụọ kewara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri. N'otu ọmụmụ ihe, a tụrụ ọ̀tụ̀tụ̀ ndị sonyere n'ọ̀tụ̀tụ̀ oge abụọ ahụ. N'ime ọmụmụ ihe ọzọ, ndị sonyere na-akọ banyere ịdị arọ ha na ntọala ma mee ka onye dọkịta tụọ ya na nsonye.
Ndị nyocha ahụ chọpụtara na ndị sonyere gosipụtara ma ọ dịkarịa ala ịrị elu pasent 10 n'ịdị arọ ahụ gosikwara mmụba nke enweghị mmasị.
"Ọ bụrụ na uche na ahụ jikọtara ọnụ, mgbe ahụ ọ bụrụ na otu na-agbanwe nke ọzọ kwesịrị ịgbanwe," Sutin kwuru na nkwupụta. "Nke ahụ bụ ihe nchọpụta anyị na-atụ aro."
Ihe tụrụ ndị nyocha ahụ n'anya bụ na ndị buru ibu na-akọkwa mmụba na ntule anya, na ọ bụ ezie na ntule na-abawanye maka onye ọ bụla toro eto, ọmụmụ ahụ na-egosi na ibu ibu nwere ike "ịkwalite usoro a na-emetụta afọ ndụ."
Ha na-eche na ihe kpatara nkwubi okwu ọzọ nwere ike ịbụ na "onye na-akpachi anya nwere ike ịdị na-ekwu okwu na-adịghị mma banyere enyemaka nke abụọ na nri abalị nye onye nọ n'etiti ibu ibu karịa onye ibu ya kwụsiri ike."
Na nkenke, ichetụ obere oge maka otu mgbakwunye ahụ ga-esi nyere aka n'ịba ibu n'ọdịnihu agaghị abụchaghị ịtụgharị na iguzogide ọnwụnwa ahụ.
Nde ụmụaka 28 na-atụ anya ka ha rite uru na ọgwụ mgbochi ụmụaka nke Pfizer
CDC akwadola ugbu a iji ọgwụ Pfizer's COVID-19 maka ụmụaka dị afọ 5 ruo 11
Ee, Anyị kwesịrị ịdị na-edobe àgwà ịsa aka ka mma nke anyị mepụtara na mbido ọrịa a
Ịsacha aka gị bụ ụzọ dị mfe ma dị irè iji belata mgbasa ọrịa
Ejikọtara oge Flu yana COVID-19 na-egosi egwu nke 'Twindemic,' na-eme ka mkpa ịgba ọgwụ mgbochi ahụ dịkwuo ngwa ngwa
Afọ flu ọjọọ n'elu ọrịa na-efe efe nwere ike ịpụta nsogbu maka ụlọ ọgwụ enweelarị nsogbu
Ihe nzuzo Adele na-ebelata ibu arọ ekpughere: Nke a bụ ka onye ọbụ abụ '30' siri gbadaa
Ọnụ ọgụgụ slimmer, album ọhụrụ na ndụ na-ekpori ndụ na nwa ya nwoke. N'agbanyeghị ihe ịma aka ndị gara aga, Adele na-ebi ndụ obi ụtọ. Mana n'ezie, onye ọ bụla nọ na-eche kedu ka o siri tụfuo oke ibu?